धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघमा तालाबन्दी – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
मंसिर २८ गते हुने भनिएको निर्वाचन अन्यौलमा
२०७६, २५ मंसिर बुधबार २३:१२
धनकुटा । धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा अज्ञात समूहले विज्ञप्ती टास्दै तालाबन्दी गरेको दुई दिन वितिसक्दा पनि खुल्न सकेको छैन । संघको कार्यालयमा गरिएको तालावन्दीका कारण यहि २८ गते हुने भनिएको निर्वाचन प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सोमवार सहज रुपमा संघको ४५ औं साधारण सभा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन प्रक्रिया सहज रुपमा नै अगाडि बढ्ने आम व्यवसायीहरुको अपेक्षा विपरित मंगलवार विहानै अज्ञात समूहले संघको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि निर्वाचन हुने नहुने अन्यौल बनेको छ ।
यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्णबहादुर घिमिरेसँग सम्पर्क गर्दा सरोकारवालाहरुसँग वार्ता गरेर समाधान निकालिने जानकारी दिए । निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आज बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रशासनले संघका पदाधिकारीहरुसँग गरेको वार्ताले निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गर्ने सहमती भएको थियो । सोहि सहमतीका आधारमा प्रगतिशील समूहको तर्फबाट नेकपा र लोकतान्त्रिक समूहका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गरेको थियो । सो वार्ता पनि विना निष्कर्ष सकिएबो थियो ।
वार्तामा कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नु पर्ने माग राखेका थिए भने नेकपाले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेर नयाँ निर्वाचन मिति तोक्नु पर्ने तर्क अघि सारेका थिए । बैठकमा सहभागी नेकपाका प्रतिनिधि नरेन्द्र पोख्रेलले ताला लगाउनेलाई सहमतीमा ल्याएर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । यता संघको कार्यालयमा टाँसिएको विज्ञप्तीमा असन्तुष्ट पक्षले आफ्नो परिचय नै नखुलाएकोले वार्ता को सँग गर्ने भनि कांग्रेसका कोषाध्यक्ष दिनेश राईले प्रश्न गरे । उनले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने भएपछि हारको डरले नियोजित रुपमा यो षडयन्त्र रचिएको आरोप लगाए ।
आजको दलसहितको बैठकले सहमती गर्न नसकेपछि भोली विहीबार पनि सहमतीका लागि बैठक बस्ने प्रशासनले जनाएको छ ।
कोषाध्यक्ष राईका अनुसार संघको कार्यालयमा नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको सचिवालयद्वारा सञ्चालित जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समिति र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समन्वयमा सञ्चालित ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) को कार्यालयसमेत रहेकोले अज्ञात समूहले लगाएको ताला प्रशासनले खोल्नु पर्ने बताउँछन् । उनले प्रशासनले सरकारसँग सरोकार राख्ने कार्यालयमा समेत लगाएको ताला खोल्न नसक्नु प्रशासनको कमजोरी रहेको बताए । यता प्रजिअ डा. घिमिरेले अनुगमन समिति पहिले रहेको भएपनि अहिले नरहेको जानकारी दिए ।
यसैवीच लोकतान्त्रिक समूह मत माग्दै प्रचारमा जुटिसकेका छन् ।
सिचाईका लागि किसानहरुलाई प्लाष्टिक टनेल वितरण